वीर्यको वृतान्त : कसरी बन्छ ? - Limbuwan khabar
बुधबार, ०७ असोज, २०७७ बिहानको ११:२७ बजे, लिम्बुवान खबर
पुरुषमा उत्तेजना वा स्खलनको दौरान मूत्रमार्गबाट निस्केन तरल पदार्थलाई वीर्य भन्ने गरिन्छ । यो प्रोटेस्ट ग्रन्थी र अन्य पुरुष प्रजनन् अंगहरूद्वारा शुक्राणु वा अरू तरल पदार्थ ग्रहण गरेर बन्ने गर्छ । आम रुपमा वीर्य गाढा एवं सेतो रंगको हुने गर्छ । तर कैयौं स्थितिमा यसको रंग र गुणवत्तामा भिन्नता पनि आउन सक्छ । पातलो वीर्यले कम शुक्राणु भएको संकेत गर्ने गर्छ । जसबाट हाम्रो प्रजनन् क्षमता प्रभावित हुने गर्छ ।
वीर्य प्रोटेस्ट ग्रन्थीबाट वीर्य बन्ने गर्छ । वीर्य पुटिकाद्वारा ६५ देखि ७० प्रतिशत वीर्य बन्ने गर्छ । जसमा चिपचिपे फ्रुक्टोजको निर्माण हुने गर्छ । यसपछि यसमा सेतो रंगको तरल प्रोस्टेट ग्रन्थीद्वारा स्रावित भएर मिल्ने गर्छ । प्रोस्टेट ग्रन्थीबाट निस्कनेवाला सेतो तरल पदार्थमा सिट्रिक एसिड, लिपिड र फोस्फेट मिल्ने गर्छ । यसबाट नै वीर्यको सम्पूर्णता मिल्ने गर्छ । यसको अलावा बल्बोर्रेथ्रल ग्रन्थी एक तरलको उत्पादन गर्ने गर्छ यो योनी वा गर्भाशय ग्रीवामा मौजुद शुक्राणु कोशिकाहरूको गतिशीलतामा मद्दत मिल्ने गर्छ । वीर्यमा यस तरल पदार्थको स्राव १ प्रतिशत भन्दा कम हुने गर्छ ।
वीर्य बन्नको लागि निम्न पदार्थको आवश्यकता पर्छ
२ जस्ता (जिंक)
७ रक्त समूह एन्टिजन
८ सिट्रिक एसिड
११ भिटामिन बी
१५ युरिक एसिड
१६ ल्याटिक एसिड
१८ एस्कार्बिक एसिड
१९ अन्य पोषक तत्वहरू
वीर्य पातलो हुने कारण
आजको समयमा वीर्य पातलो हुने समस्या धेरैको समस्या बनेको छ । जुन निम्नानुसार छ ।
१ शुक्राणुको संख्यामा कमी हुनु
शुक्राणुको संख्यामा हुने कमीले वीर्य पातलो हुनु सामान्य सामान्इ कारण हो । यसलाई अल्पशुक्राणुता पनि भन्ने गरिन्छ । वीर्यमा शुक्राणुहरूको एक सामान्य संख्या पाउने गरिन्छ । भनिन्छ एक लिडर वीर्यमा १५ करोण शुक्राणु हुने गर्छ ।
त्यस्तै, विभिन्न संक्रमणका कारण पनि वीर्य पातलो हुने गर्छ । अर्काेतर्फ अण्डकोषमा हुने विभिन्न किसिमको ट्युमर, हर्माेनको असन्तुलन, शुक्राणुलाई वीर्तसम्म लैजाने नलीमा समस्या आउनु आदिले पनि यसलाई पातलो बनाउने गर्छ ।
२ नियमित स्खलन
नियमित रुपमा गरिने स्खलनले पनि वीर्य पातलो हुने गर्छ । यदि हामी एक दिनमा कैयौं पटक हस्तमैथुन गर्छाैं भने वीर्यको गुणवत्ता पहिलोपटकको भन्दा पातलो बन्दै जान्छ । हाम्रो शरीरलाई फेरि वीर्य बनाउनको लागि केही घण्टा लाग्ने गर्छ ।
३ जस्ता (जिंकको कमी)
वीर्य पातलो हुनुको अर्काे कारण हो शरीरमा जस्ताको मात्रा पातलो हुनु । एक अध्ययन अनुसार पुरुषमा जस्तोको एक निश्चित मात्रा हुने गर्छ । यदि पुरुषमा जिंक निश्चिम मात्राभन्दा कम भयो भने शुक्राणुको संख्यामा कमी आउने गर्छ ।
शुक्राणुको कमीलाई हटाउनको लागि जिंक सल्फेटको सेवन आवश्यक हुन्छ ।
यदि वीर्य पातलो भएको छ भने यसको पछि शीघ्रपतको समस्या पनि कारक हुन सक्छ । कैयौं पटक यौन सम्पर्कको समयमा छिटै वीर्य स्खलन हुने गर्छ । यस वीर्यमा समेत शुक्राणु रहेको हुन्छ । यसको कारण पनि वीर्यको गुणवत्तामा प्रभाव पर्ने गर्छ ।
वीर्य गाढा बनाउने घरेलु तरिका
कैयौं रिसर्चमा यो कुरा पाउने गरिन्छ कि वीर्य गाढा र सेतो हुनु स्वस्थ वीर्यको निशानी हो । जबकि पातला वा पानी जस्तो वीर्यमा शुक्रकिटको कम हुन्छ । अहिले धेरै पुरुषमा वीर्य पातलो हुने समस्याले सताउने गरेको पाइन्छ । तर यस्तो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने त ?
१ व्यायामबाट वीर्य गाढा बनाऔं
विभिन्न अध्ययनहरूले यस कुरालाई पुष्टि गरेको छ कि वजन कम गर्नको लागि गरिने व्यायामले हाम्रो शुक्राणुको संख्यामा वृद्धि हुन्छ । यसका अलावा अध्ययनले यो पनि भन्ने गरेको छ कि एक सप्ताहमा कमसेकम १५ घण्टाको एक्सरसाइजले मांसपेशीलाई मात्रैै फाइदा होइन, यसले वीर्यनिर्माणमा पनि फाइदा पु¥याउने गरेको पाइन्छ ।
२ तनाव हटाऔं
कुनै पनि प्रकारको तनावले शरीरको अंगहरूमा विभिन्न किसिमको विपरीत प्रभाव पार्ने गर्छ । तनावका कारण मांसपेशीहरूमा थकान महसुस हुने गर्छ, साथमा ऊर्जाको स्तर समेत कम हुने गर्छ । तनावग्रस्त व्यक्तिले थकानका कारण प्रजनन् क्षमतामा ध्यान दिनै सक्दैन । त्यसैले तनाव हटाउनु नै वीर्य बाक्लो बनाउने अर्काे विधि हो ।
३ वीर्यलाई गाढा बनाउनको लागि अश्वगन्धाको प्रयोग
भारतमा सदियौंदेखि अश्वगन्धाको प्रयोग गर्ने गरिएको छ । यसको भारतीय जिनसेंगको नामले समेत जान्ने गरिएको छ । आयुर्वेदमा यौन रोगको उपचारके लागि यसको उल्लेख गरिएको छ ।
४ सूर्यमुखीको बिउले बनाउन सकिन्छ वीर्यलाई गाढा
वीर्यलाई गाढा बनाउनको लागि हामीले नियमित रूपले सूर्यमुखीको गेडा सेवन गर्न सकिन्छ । एउटा सामान्य चिया कपको चौथाइ भाग सूर्यमुखीको बिउलाई एकमहिनासम्म सेवन गर्दा वीर्य गाढा हुने गर्छ ।
५ भिटामिन डी र क्याल्सियमको प्रयोग
रिसर्चमा यस कुरालाई समेत उल्लेख गरिएको छ कि क्याल्सियमको मद्दतले वीर्यको पतलेपनको समस्यालाई दूर गराउन सकिन्छ । यस विषयमा भएको कैयौं अध्ययनले यो कुरा पुष्टि गरेको छ कि भिटामिन डी र क्याल्सियमको सेवनले वीर्य बढाउन मद्दत गर्छ ।
६ एन्टिअक्सिडेन्टयुक्त खाद्य पदार्थ
एन्टिअक्सिडेन्टयुक्त खाद्य पदार्थले हाम्रो शरीरलाई कैयौं तरिकाले स्वस्थ राख्न मद्दत गर्ने गर्छ । निम्न एन्टिअक्सिडेन्टले वीर्यलाई बाक्लो बनाउन मद्दत गर्ने गर्छ ।
– भिटामिन ई
–कोइजाइम क्यु १०
७ वीर्यलाई बाक्लो बनाउने वाला खाद्यपदार्थ
केही खाद्य पदार्थको सेवनले वीर्यलाई गाढा बनाउन मद्दत पु¥याउने गर्छ । जसमा दही, बदाम, लसुन, अनार, राजमा, ग्रीन टी, केरा, कागती, बेसार लगायतका पदार्थहरू रहेका छन् ।
स्रोत : माइउपचार